Monday March 09, 2020 - 18:09:14 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar isku day dil ah oo ka dhacay magaalada Al Khurduum ee caasimadda wadanka Suudaan.
Cabdalla Xamduuk oo ah R/wasaaraha xukuumadda KMG ah ee wadanka Suudaan ayaa sheegay in uu si dirqi ah uga badbaaday weerar isku day dil ah oo maanta lagula beegsaday bartamaha magaalada caasimadda ah.
Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in qarax miino lala beegsaday kolonyo gaadiid ah oo R/wasaaraha gelbinaysay balse majirin wax dhibaata ah oo gaaray Cabdalla Xamduuk.
Saacado kadib markii uu dilka ka badbaaday ayuu qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitterka wuxuuna sheegay in uu caafimaad qabo, dhinacyo ka dhan ah Thowradii shacabka ayuu ku eedeeyay in ay mas'uul ka yihiin wixii dhacay.
Hoggaamiyaal katirsan golaha isbedelka kacdoonka Suudaan ayaa isku daygii fashilmay ee maanta ku sifeeyay Inqilaab ka dhan ah kacdoonka shacbiga ah ee dalkaasi ka istaagay sanadkii hore.
illaa iyo hadda majirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxii maanta ka dhacay magaalada Khurduum waxayna siyaasiyiinta Suudaan ku eedaynayaan sirdoonno dibadda ah oo doonaya in ay dib usoo nooleeyaan nidaamkii Cumar Xasan Al Bashiir.